Ukhuphelo lwe-Aethersx2 ye-Android [i-PS2 Emulator]-Luso Gamer
Ukhuphelo lwe-Aethersx2 ye-Android [i-PS2 Emulator]
Novemba 22, 2021 by John Smith
I-emulator entsha yokudlala yakhiwe kwaye yasungulwa kubathandi beMidlalo yePS2. Nangona iphantsi kwesigaba sokwakha, isaqwalaselwa imfuno yabadlali. Siphumelele ukuzisa inguqulelo ye-beta ye-Aethersx2 Apk.
Isixhobo sokudlala esisibonisa apha sahlukile. Nkqu ibango ingcaphephe, ngaphezu 90 per cent of PS2 Imidlalo iqhuba kakuhle. Nangona singakhange sisijonge isixhobo, kodwa ngokutsho komthombo osemthethweni sisebenza kuphela kuzo zonke ii-smartphones ze-android.
Ngezantsi apha siza kukhankanya zonke iinkcukacha kuquka namanyathelo aphambili. Oko kuya kunceda umthandi womdlalo ukonwabele amava ePS2. Ke uyasithanda esi sixhobo sitsha simangalisayo kwaye ufunde ukusisebenzisa. Emva koko khuphela inguqulelo yamva nje ye-Aethersx2 App ukusuka apha.
Yintoni i-Aethersx2 Apk
I-Aethersx2 Apk sisixhobo se-android esixhaswe ngumntu wesithathu esijolise kubathandi bomdlalo wePS2. Izitishi zobuqu zithathwa njengezona zixhobo zisetyenziswayo nezithandekayo zedijithali. Isetyenziselwa ukudlala ii-apps ezahlukeneyo zokudlala kwizikrini ezinkulu.
Nangona kunjalo, imakethi ikwaphuphuma nezinye izixhobo zedijithali. Ezinje nge-Android, iWindows, i-iPhone kunye neeKhompyutha zoBuqu. Nangona kunjalo uninzi lwabadlali bayawuthanda umdlalo owahlukileyo kwizikhululo zokudlala. Kuba amava kunye ingqokelela imidlalo yodwa.
Nditsho nemizobo kunye nokuxinana kwepixel esetyenziswa ngaphakathi kwemidlalo igcinwa iphambili. Ke ngoko abadlali baya konwabela imeko-bume eyinyani kunye ne-HD Display. Kukho ingxaki enye PS2 Imidlalo ukuba zonke ezinjalo software ehambelanayo akukho ukusebenza kuzo zonke ezinye izixhobo.
Oko kuthetha ukuba iifayile zefomathi yePS azihambelani nee-smartphones ze-android. Yiyo loo nto ijolise kwisicelo sabasebenzisi be-android kunye neemfuno, abaphuhlisi ekugqibeleni babuyile nale nto imangalisayo Wendlela yesiphelo. Ngoku ukudibanisa i-Aether SX2 kuya kunceda ukuqhuba iifayile ze-PS kwii-smartphones ze-android.
ubungakanani 39.17 MB
umbhekisi Damon Dlala
Igama lepakheji com.damonplay.damonps2.pro.ppsspq
Ngelixa uphonononga isixhobo ngaphakathi kweemobiles ze-android. Sifumene i-app ikhethwa ngokupheleleyo kwaye isebenza kuzo zonke izixhobo. Nangona ubuncinci obufunekayo ekusebenzeni yi-Snapdragon Chipset. Kodwa ezo zixhobo zisweleyo eli nqaku zinokukonwabela umdlalo ngaphandle komqobo.
Nangona imakethi ye-intanethi ye-intanethi igcwele ezinye ii-Simulator zePS ezahlukeneyo. Ezo zikwanceda ukusebenzisa imidlalo eyahlukeneyo yePS2 kwii-smartphones ze-Android. Nangona kunjalo uninzi lwee-simulators ezifikelelekayo kwi-intanethi ziyiprimiyamu kwaye zifuna ubhaliso.
Ngaphandle kokuthenga umrhumo weprimiyamu, abasebenzisi be-android abanakonwabela iimpawu. Nokuba ezinye zesoftware zinokunika ufikelelo olusekwe kwisilingo. Apho iimpawu eziphambili zigcinwa kwisigaba sothintelo kwaye zingaze zifumaneke ukulungiswa.
Ngaphandle kokuba umsebenzisi wesixhobo uthathe isigqibo sokuthenga umrhumo weprimiyamu. Ikakhulu izilingisi ezinjalo zisetyenziselwa ukuqhuba kwaye zonwabele iSikhululo soBuqu seSikhululo ii-apps kunye nemidlalo kwii-smartphones. Kodwa ezo apps kunye neefayile zomdlalo zibonisa imiba emininzi yokuhambelana.
Oku kuthetha ukuqhuba iifayile ze-app ezifuna imigangatho ephezulu kunye nespekthi sesixhobo. Nangona kunjalo siphumelele ukuzisa le app simulator igqibeleleyo. Oko kufumaneka simahla kwaye akufuni zixhobo zongezelelweyo. Nokuba iyahambelana ngokupheleleyo nazo zonke izixhobo, yiyo loo nto uthando simulator emva koko ukhuphele i-Aethersx2 Android.
Ukufakela isixhobo uncedo ukuqhuba PS2 Apps kunye neMidlalo.
Akukho zibonelelo zongezelelweyo ezifunekayo ekusebenzeni.
Ihambelana ngokupheleleyo nazo zonke iifayile zePS2.
Uyikhuphela njani iAethersx2 Apk
Xa kufikwa ekufikeleleni kwiifayile ze-Apk. Emva koko ayifumaneki ukufikelela kwiVenkile yePlay. Ngenxa yokuba isixhobo sithathwa ngokuba siphantsi kwesigaba sokwakha. Kungoko kuqwalaselwa ukufikeleleka komsebenzisi kunye nesicelo sabo sobubele.
Siphumelele ukuzisa inguqulelo yokusebenza kwe-beta kubasebenzisi be-smartphone be-Android. Ke uyazithanda izinto eziphambili zesixhobo kwaye ulungele ukonwabela yonke imidlalo yesiKhululo soMntu. Emva koko khuphela inguqulelo yamva nje ye-Aethersx2 Emulator.
Ifayile yokukhuphela i-Aethersx2 esiyinikezelayo apha yeyoqobo. Kwaye ifayile ye-Apk esibonelela ngayo apha yinguqulelo ye-beta yabasebenzisi. Nangona kunjalo, asisoze siqinisekise malunga nokusebenza kakuhle kwe-Apk. Ngoko khuphela kwaye ufake isixhobo ngomngcipheko wakho.
Ukuza kuthi ga ngoku, sabelane ngezixhobo ezininzi ezifanayo ezinxulumene neSikhululo soBuntu kunye ne-iPhone. Ke ngoko ulungele ukujonga ezona zokusebenza zingcono kufuneka ulandele amakhonkco. Ezizi Uluhlu lweeNkqubo eziPhezulu ze-Emulator zika-2021 kwaye Iqanda NS yesiphelo APK.
Ke uyathanda ukudlala ii -apps kunye nemidlalo yamva nje yePS2. Kodwa ngenxa yokungafikeleleki kwesikhululo, uphoswa lithuba. Ke ungabinaxhala kuba apha sizise iAethersx2 Apk. Ngoku ukudibanisa isixhobo kuya kunceda ukonwabela yonke imidlalo yobuqu kwi-smartphone yakho ye-android simahla.
iindidi izixhobo, apps tags Aethersx2 Android, Aethersx2 Apk, I-Aethersx2 App, Isixhobo se-Aethersx2, Wendlela yesiphelo Post yokukhangela
Baca Komik Apk Khuphela Kwi-Android
Z Library Apk Khuphela ye-Android [Amanqaku + Iincwadi]